Kulan Jack Russell Pit A Dog in Mid ka mid ah Pack - Rule News
Kulan Jack Russell Pit A Dog in Mid ka mid ah Pack
Waxaan asal ahaan doonayaan in la helo saaxiibo u annagana siin doono inta badan faa'iidooyinka aan ku qabaa inaan u baahanahay. Well, haddii aad raadinayso in eey xoogaa waa kumuunayaasha hal-in-xirmo, waxaad ka heli laga yaabaa in Jack Russell Terriers xiiso leh oo ku filan.
Eyga waxa uu leeyahay taariikh la bartey loomed in la siiyo kor u specie ah.
Waxaa la sheegay in breeder ah ee eey this, a arday fiqi dhallinyarada ahaa oo University Oxford magacaabay John Russell mar la kulmay milkman la Pit cad in uu leeyahay dhibco indhaha iyo dhegaha.
eey Tani noqday xiisaha taasi oo markii dambe cadeeyay inuu yahay uu dhigay afgembi eey cusub nooc in badan ayaa bartay sida xayawaanka jeclahay.
eey ugu horeeya ee uu ku arkay ayaa loo magacaabay “Trump” kaas oo kale 60 noocyada terriers ayaa ka dib la rijeynaya ka.
Iyada oo nooca Pit a ee aasaasiga ah si ay ku tagaan iyo in ka badan dhulka (Pit iyadoo jidka ag fadhida ka dheer Latin yimid “Terra” taas oo macnaheedu yahay dhulka), terriers Jack Russell sidoo kale u hesheen sidii ay u ugaarsan iyo scour for ugaarsiga.
Sayidka, waa in ay in la siiyaa duyaarin ku filan si ay u dhigay off uus ayay isu soo urursadaan ka qodaya ciidda midkood aaso Kansi ama inuu ka soo kabsado oo maal qarsoon lagu hayaa muddo dheer ka hor.
ratter An fiican, Jack Russell Terriers cadeyneysaa inay wanaagsan tahay “guriga ka” tan iyo markii ay sii jiir ugu guriga ka maqnaato.
Jack Russell Pit (credit Photo: Wikipedia)
rat kasta oo nasiib darro ah in dhacaya in ay gudaha meelood Pit tani waa hubi inaad la kulmi ay cadaab deg dega ah. Sayidka, Milkiilayaasha isku arkaan iyadoo labada eey oo bisad ka mid kumuunayaasha.
Mid ka mid ah dabeecadda aasaasiga ah ee eey tani waa ay dabeecada dhinaca shisheeyayaal. Waxay si fudud u fahmi karaa, kuwaas oo waa in la guryahoodii iska dhawray iyo kuwa la aqbali karin guriga gudihiisa.
Fikirkan aad sidoo kale iyaga ka dhigaa inay watchdogs wanaagsan. Waxay si gaar ah ayaa loogu talagalay in uu dagaal on xooga.
Oo intii ay noqon kartaa mid aad vocal, badan oo iyaga ka mid ah dalaka ruushka oo kaliya marka ay ka heli sabab wanaagsan in.
Iyagu ma ay muuqan ha sharta in kastoo. Laakiin marka ay urin khatar, waxay muujin karaan off colaad u adeega karin sida digniin ku wajahan shisheeyayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, mar shisheeyaha waa ha guriga galay by milkiilaha, Jack Russell a horay u dulqaadan karin isaga ama iyada ay joogaan.
Pit Tani waxay sidoo kale waa eey qoyska iyo dooni waayo wehel aadanaha. Oo iyana waxay u jacaylka carruurta waa weyn oo xiiso leh.
Si kastaba ha ahaatee, marka la dilo ama la tusay daaweynta aan habboonayn, waxaa laga yaabaa in ula kac ah ama shil ah, waxay ka fal karaa dabeecadaha gardarada ah.
Waxay gafayaan sii muujiyey iyagoo la'aan cabsi dhinaca eeyaha weyn oo nasiib daro u horseedi kartaa dhaawac, qaar ka mid ah xitaa waxay noqon kartaa mid dilaa ah.
Waxa kale oo loogu calaamadiyey ay sirdoonka iyo ruuxa wanaagsan. sifooyinka waxay noqon karaan kuwo heer sare arki karo iyada oo ay cajiib wax.
Sayidka, ay u baahan yihiin dheeri ah oo ku saabsan tababarka rasmiga ah haddii aadan u dulqaadan karin dhaqanka adag.
Waxa ugu wanaagsan in kastoo la Jack Russell waa in ay garan karaan tababarka iyo shaqo fiican u qaban inta badan oo iyaga ka mid.
Dhab ahaan, waxay waxaa lagu yaqaan in kooxda heysata horyaalka ay muujinayso kala duwan kaatunkiisii ​​oo tartamada kale ee la mid ah.
Hollywood ayaa sidoo kale la aqoonsan yahay u hesheen sidii of eeyaha, kuwaas oo.
Weheliyaan astaamaha jirka yeeshee oo wanaagsan, kumuunayaasha this ayaa hore u dhigay magacyada in shaashadaha.
Haddii Wishbone, Milo (ka Waji) iyo Eddie (ka Frasier ah) wac dawan aad on markaas shaki kuma jiro in aad garan karaan eey this.
Jack Russell sidoo cadaalad la duyaarin. eyga A of size yar, sirdoonka this aadan canshuur doonaa baahida qurxinta.
Ma rabtaa in aad Win in blackjack?
Bowers & Wilkins P5 Wireless Sameecadaha Review
Waxa aad geftay Week Tani
20850	0 Dog, Frasier, Jack Russell, Jack Russell Pit, John Russell, Oxford University, Xayawaanka, Pit
← A Show TV Tassna duubay on Mars?! Gadashada A Guide Mountain Bike →